Noushamwari kuti tishanyire 127th Canton Fair
Post nguva: Chivabvu-21-2020
127th Canton Fair ichaitirwa online kubva munaJune 15 kusvika 24, takaenda kumusangano wecanton nematumba 3-4 kubvira 2012, tiri kuenda kunogadzirira anotevera mabasa kuvhara kushomeka kweinternet Canton Fair. 1. Nguo mapikicha pamuenzaniso: Yedu nyanzvi R & D timu inogadzira iwo masampuli matsva anopfuura 1000 ...Verenga zvimwe »
Post nguva: Chivabvu-20-2020
127th Canton Fair ichaitirwa online kubva munaJune 15 kusvika 24. Iyi online Canton Fair ichave nyowani dhizaini dhizaini uye maitiro ekugadzirisazve. Ichapa zvikamu zvitatu zvinofambidzana: Docking Platform, Cross-muganhu E-commerce Nzvimbo uye Live Kushambadzira Service, iyo inobatanidza butted j ...Verenga zvimwe »
Mwenje yeguta inosimbisa iyo yakasarudzika theme ye skateboard ine zvinhu zvehusiku mwenje nguva. Iyo pfungwa yekufamba, inoshanda inoshanda ruzivo uye modular ruzivo inovandudza iyo yakakosha skateboard zvinhu. Inogona kuenzanisa yakajeka mivara yezvakaberekwa lime green, electro-optic yepepuru uye psyge ...Verenga zvimwe »
Kuenderana kwemafashoni uye kuita
Vanhu vemazuva ano vanotarisira kudzokera kuhupenyu hwavo hwepakutanga kubva mukushushikana kwemazuva ese nekushushikana uye kuteedzera hupenyu hwechokwadi. Neye yakanakisa yekusona uye yakasununguka, yakapusa & yakasarudzika mutambo bhachi, tinogona kudzora nhanho kubva kuhupenyu hwedu hwekukurumidza uye husina mutsindo nekunyarara. Uyu mutambo ...Verenga zvimwe »